Waftigii Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya oo booqday qaar kamid ah Jaamacadaha Puntland “SAWIRO” | Radio Iftin
Waftigii Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya oo booqday qaar kamid ah Jaamacadaha Puntland “SAWIRO”
(Monday, March 23, 2015)- Waftigii ka socday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya oo dhawaan yimi Puntland ayaa booqday xarumaha waxbarashada Puntland gaar ahaan Jaamacadaha Bariga afrika ‘PSU’ Bosaaso University iyo kuliyadda tababarka macalimiinta ee GTEC oo ku yaala Garowe.
Waxaana kamid ahaa waftiga booqday Jaamacada agaasimayaasha deeqaha waxbarashada, Fayodhowrka iyo bar barbaarinta ee Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya, iyo sidoo kale maamulka jaamacadda Ummadda Soomaaliya,.
Waxana booqasha dooda ku weheliyay agaasimaha tacliinta sare ee Puntland Cabdullahu Cali Jaamac (Dhubad) iyo agaasimaha imtixaanaadka Puntland Axmed Maxamuud Warsame Saahid.
Waftiga ayaa siwayn ula dhacay heerka waxbarasho ee Jaamacadah Puntland waxayna ku amaaneen wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland hormarka muuqda ee ay ka samaysay waxbarashada Puntland.
Cabdirisaaq Axmed Faarax (Qowle) oo ka tirsan maamulka Jaamacad Bosaso ayaa sheegay in waftiga ay siiyeen macluumaad ku aadan waxbarashada jaamacada ayna siwayn ula dhaceen xogta ay siiyeen.
Waftiga ayaa intaysan booqan jaamacadaha waxa tababar uqabtay xafiiska imtixaanaadka Puntland kaaso usoconayey Mudo laba bari ah.